सरकारले बनाउला त रुक्मांगद कटुवाललाई प्रदेश प्रमुख ? (भिडिओसहित) « Janata Samachar
सरकारले बनाउला त रुक्मांगद कटुवाललाई प्रदेश प्रमुख ? (भिडिओसहित)
प्रकाशित मिति : 13 January, 2018 8:59 am
काठमाडौँ । निर्वाचनअघि नै प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हुनुपर्ने थियो । तर शेरबहादुर देउवा सरकारले यो काम गर्न सकेन ।
सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादीका मन्त्रीलाई विना विभागीय बनाउने कामसँगै सत्तामा रहेकै दलहरुबीच सहकार्य टुटेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग कांग्रेसको सम्वाद नै थिएन । अरु साना पार्टीहरु टुटफुटसहित सरकारमा जान हतारिएका थिए । सरकार निर्वाचनमा होमिएको थियो । त्यसैले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति रोकियो र निर्वाचन भएको एक महिना नाघ्दासमेत नियुक्तिमा सरकार सफल देखिएको छैन ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी थियो । तर सरकार त्यसमा पनि निर्णयविहीन भयो र केयरटेकर सरकार हुँदाहुँदै कार्यकर्ता भर्ती र नियुक्तिमा अल्झियो । प्रदेश प्रमुखमा खासगरी माइती नेपालका अनुराधा कोइराला र पूर्व सेनापति रुक्मांगद कटुवालले रहर गरेको खबर आइरहेको छ ।
सरकार कुनै न कुनै पूर्वप्रशासक, सामाजिक क्षेत्रमा पहिचान बनाएकालाई प्रदेश प्रमुख बनाउने तयारीमा देखिन्छ । तर, रुक्मांगद कटुवाल प्रदेश प्रमुख बन्लान् ? बने भने कस्तो होला राजनीतिक परिदृश्य ? कटुवालको आगमनले अस्थिर राजनीति स्थिरतामा जाला या अरु अस्थिर हुँदै आन्दोलन मच्चिएला ? या प्रदेश सांसदहरुको शपथ अघि युवा आन्दोलित होला भनेर कटुवालको नियुक्ति रोकेर बस्दा अरु प्रदेश प्रमुख पनि तोक्न नसकेको हो सरकारले ?
हेर्नुहोस् जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम बाइलाइनको पूरा भागः